Sele siwazi umhla wokukhutshwa kuthotho lweStephen King yeApple TV + | Ndisuka mac
Ibali likaLisey, luthotho olutsha oluza kuqala kwi-Apple TV + kuphela, uthotho olusekwe kule ncwadi inegama elifanayo elibhalwe nguStephen King, incwadi ngokutsho kombhali, uphefumlelwe ngumtshato wakhe kunye nomnye umbhali wenoveli uThabitha King.
Inkulumbuso yale nkonzo yesiqendu se-8 iya kuba ngoJuni 4, uthotho olwenziwe ngeziqendu ezisi-8 eziza kufika eqongeni ngokufika rhoqo ngolwesiHlanu, ifomathi yokuqala eyenziwe ngu-Apple kulo lonke uthotho olukhutshwa kulo nyaka.
Iminyaka emibini idlulile okoko u-Apple wathenga amalungelo kule ncwadi ukuyizisa kwiscreen esincinci. Incwadi eyapapashwa nguStephen King ngo-2016 waze wafumana itywina leWorld Fantasy Award ngo-2007. Umbhali ngokwakhe ukwanguye ophetheyo ukuyiguqula le ncwadi ibe yifomathi ye-serial, into leyo khange kube ngumsebenzi olula, njengoko kuchaziwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Kodwa ukongeza, uya kuba nemisebenzi yemveliso noJJ Abrams. Incwadi kaLisey's Story, isibonisa iziganeko ezingaqhelekanga ahamba kuzo umfazi emva kokuphulukana nomyeni wakhe emva kweminyaka engama-25 betshatile, e indibaniselwano yothando kunye noloyiko lwengqondo.
Ukongeza kokuba UJulianne Moore kwindima kaLisey Landon, nathi siyahlangana UClive owen, NjengoScott Landon, ecaleni kukaJoan Allen, uDane DeHaan, uSung Kang kunye UJennifer Jason Leigh kwindima kaDala.
UJuliane Moore uyakuba yinxalenye yefilimu I-Sharper yeApple TV + umboniso bhanya-bhanya osibonisa ibali lomfazi ozama ukungena kwilizwe lezityebi eManhattan, iprojekthi eza kwenziwa yiApple Studios kunye neA24, inkampani enye yemveliso engasemva Ematyeni, Ifilimu ekhokelwa ngu-Sofia Coppola kunye no-Bill Murray.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Sele siwazi umhla wokukhutshwa kuthotho lweStephen King yeApple TV +